آموزش ساخت فایل زیپ (Zip) در گوشی اندروید ؛ چگونه در اندروید فایل فشرده بسازیم؟ - مجله خبری ای بی سی مگ
Vakio ity lahatsoratra ity raha te-handefa rakitra maromaro miaraka ianao na hanery azy ireo ao anaty lahatahiry iray. Ato amin’ity lahatsoratra ity ny Tutorial famoronana rakitra zip (Zip) Amin’ny finday Android efa nandoa.
Ny fandefasana rakitra kely maromaro, toy ny rakitra lahatsoratra kely, dia matetika miadana kokoa noho ny famindrana rakitra lehibe iray. Noho izany dia tsara kokoa ny mamindra ireo rakitra ireo amin’ny ZIP na RAR ka ankoatra ny fampitomboana ny hafainganam-pandehan’ny rakitra dia tsy ilaina ny mandeha amin’ny dingana fanamafisana ny fandefasana na fandraisana ny rakitra. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mianatra manindry ny rakitra ianao. Ao amin’ity lahatsoratra ity dia nanome torolàlana momba ny fanaovana fisie zip amin’ny telefaona Android izahay. Maharaha vaovao.
Mianara mamorona rakitra zip amin’ny findainao Android
Ny fandefasana rakitra kely sy maromaro dia manamora kokoa ny fizotry ny famindrana rakitra. Raha tokony handeha amin’ny dingana amin’ny fisafidianana sy fandefasana rakitra tsirairay amin’ny alàlan’ny Bluetooth na Wi-Fi ianao, dia azonao atao ny mitahiry sy mandefa ny zava-drehetra ao anaty rakitra iray. Misy fampiharana maro ho an’ny zipping rakitra amin’ny Android, ny sasany mety ho fantatrao. Ato amin’ity lahatsoratra ity, dia handinika ny fomba fanerena ny rakitra amin’ny fampiharana antsoina hoe RAR, ary avy eo dia hanolotra ny fomba hanesorana ny rakitra na, amin’ny teny hafa, manala ny ao anatin’ny compressed rakitra.
Ny rindranasa RAR dia novolavolain’ireo mpamorona ny WinRAR, izay rindrambaiko malaza eo amin’ny sehatry ny Windows. Izy io dia miasa mitovy amin’ny WinRAR ary manohana karazana rakitra tahiry toy ny ZIP, RAR, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7Z, ISO ary ARJ. Mazava ho azy, raha ny tiana holazaina dia ny endrika RAR sy ZIP roa ihany no tohana.
Ianaro ny fomba RAR rakitra amin’ny Android
Rehefa avy misintona sy mametraka ny rindranasa RAR dia mandehana izany. Manokatra ny lahatahiry fitadidiana anatiny. Raha hisafidianana ny lahatahiry na lahatahiry na rakitra tianao, tsindrio ny boaty marika eo anoloan’ny tsirairay mba hanesorana azy.
Raha ilaina dia azonao atao ny manokatra lahatahiry iray ary misafidy rakitra maromaro ao amin’ny zip na RAR. Raha hiverenana any amin’ny lahatahiry ambony dia kitiho ny kisary sahala amin’ny lahatahiry voalohany izay manana ambaratonga ambony antsoina hoe Up one level. Raha te hisafidy rakitra sy lahatahiry amin’ny karatra fitadidiana ianao dia tsy maintsy manindry ny Ambaratonga iray ary manindry ny anaran’ny karatra fitadidiana.
Mariho fa ny haben’ny rakitra voafantina dia tsy maintsy latsaky ny 707 MB.
Rehefa avy nifidy ny rakitra na lahatahiry, tsindrio ny bokotra Compress na Archive eo an-tampon’ny efijery. Ity safidy ity dia amin’ny endrika andalana maromaro ary misy marika + eo akaikiny.
Safidio izao ny format file zip. Ny endrika RAR sy ZIP ary koa ny RAR 4.x, izay natao hitazonana ny fifanarahana, dia safidy telo. Tsara ny mampiasa ny endrika ZIP izay tohana tanteraka.
Raha misafidy RAR ianao dia azonao atao ny manamarina ny safidy Create solid archive. Mampiasa algorithm famandrihan-toerana manokana ny archives solid izay mandray ny rakitra ho angona mitohy.
Safidio ny làlan’ny rakitra zip araka izay irinao na ampiasao fotsiny ny fomba fanao mahazatra. Mba hamaritana ny lahatahiry haleha, tsindrio BROWSE ary safidio ny lahatahiry tianao. Raha ilaina dia azonao atao ny mametraka tenimiafina amin’ny rakitra zip mba tsy ahafahan’ny mpandray azy manokatra izany raha tsy mampiditra tenimiafina. Tsindrio SET PASSWORD hanaovana izany. Raha mila mamafa rakitra aorian’ny zipping na RAR ianao dia jereo ny safidy Delete files after archiving.
Farany, tsindrio OK eo amin’ny farany ambany amin’ny efijery hanombohana ny famoretana.
Ahoana ny fomba hanesorana ny rakitra RAR sy ZIP, sns amin’ny Android
Miaraka amin’ny fampiharana RAR maimaim-poana dia afaka manokatra mora foana ny rakitra zip ianao, ka ny endrika tohana ihany dia ZIP sy RAR. Mba hanesorana ireo rakitra avy amin’ny arisiva na rakitra maromaro amin’ny dingana iray, jereo aloha eo anoloan’ny rakitra ZIP, RAR, sns, ary tsindrio ny bokotra Extra eo an-tampon’ny pejy.
Ao amin’ny pejy misokatra dia azonao atao ny misafidy ny toerana na lahatahiry hitehirizana ireo rakitra nalaina. Raha tsy misafidy lahatahiry ianao, dia hisy lahatahiry mitovy lohateny amin’ny rakitra arisiva ho noforonina amin’ny lalana ankehitriny ary hapetraka ao anatiny ireo rakitra. Tsindrio ny bokotra BROWSE mba hisafidianana ny lahatahiry tianao.
Farany, kitiho OK eo amin’ny farany ambany amin’ny efijery hanombohana hanesorana ireo rakitra.
Ny programa famatrarana rakitra Android tsara indrindra hampihenana ny habeny sy ny zipper
Rehefa mampiasa rakitra voaporitra ianao dia maka toerana kely kokoa amin’ny fitaovanao ary misoroka ny fikorontanana sy ny fikorontanana noho ny sokajy ampiharina. Noho izany, ny fanerena sy ny decompressing rakitra dia tsy maintsy ho an’ny rehetra. Ny programa famoretana rakitra Android amin’ity rafitra fiasa ity dia manao ny asa fampihenana ny haben’ny rakitra. Ny endrika famatrarana rakitra Android mahazatra indrindra sy sehatra hafa dia ZIP, RAR ary Z7. Maro ny programa noforonina mba hanesorana ireo rakitra amin’ity endrika ity na hamorona rakitra amin’ny endrika toy izany. Ny programa malaza indrindra amin’ity sehatra ity dia RAR, izay efa fantatrao tamin’ny fizarana teo aloha. Ao amin’ny tohin’ity lahatsoratra ity, dia hifankazatra amin’ny rindrambaiko Android malaza hafa ho an’ny fanindriana sy fanalana rakitra.
Raha mitady fitaovana maimaim-poana ianao hamoronana sy hanesorana rakitra zip amin’ny Android, B1 Archiver zip rar unzip dia safidy tsara ho anao. Ity rindrambaiko ity dia manohana endrika 37 samihafa ary miaraka amin’izany dia afaka mamorona rakitra voaporitra ianao na manala ny rakitra avy amin’ny fanjakana voaporitra.
ZArchiver dia anarana hafa mahazatra amin’ity lisitra ity izay manana fahafahana manitsy sy manala rakitra. Ny fahaiza-manao encryption sy mamorona fisie zip maromaro dia singa iray hafa amin’ity rindrambaiko ity. Ny ZArchiver koa dia milamina kokoa noho ireo programa hafa rehetra ato amin’ity lisitra ity amin’ny resaka fitoniana.
WinZip no programa famatrarana rakitra Android malaza manaraka ary samy manana ny fahaiza-manao andrasana amin’ny fanerena sy ny decompressing rakitra. Ny mpampiasa interface tsara an’ity programa ity dia tena tsara ary ny mety ho hafa dia ny manohana ny habaka rahona toy ny Google Drive sy Dropbox. Noho izany, azonao atao ny manafatra ny rakitrao mivantana avy amin’ny rahona ary manatanteraka ny asa irina amin’izy ireo.
Ny XZip dia afaka mamoaka rakitra amin’ny karazana rakitra zip rehetra. Ankoatra izany, XZip dia manana navigateur anatiny. Ity lozisialy ity koa dia manana fahafahana manidy rakitra zip.
Ny endrika malaza indrindra toa ny rar, 7zip, zip ary… dia tohanan’ny 7Zipper 2.0. Ity programa ity koa dia manana fahafahana mijery rakitra lahatsoratra sy sary, ary miaraka amin’izany dia azonao atao ny mijery ny fampahalalana momba ny rafitry ny fitaovana Android anao ary manao zavatra toy ny fanafoanana ny fizotran’ny fandehanana miaraka aminy.
Mitovy amin’ny fandaharana teo aloha, Zipper dia afaka manindry sy manala ny ankamaroan’ny endrika lehibe. Ny fijerena rakitra tselatra, ny fitantanana ny rakitra, ny fitantanana ny asa, ny fijerena sary ary… dia endri-javatra hafa amin’ity rindrambaiko ity. Azonao atao koa ny mamindra ny rakitrao amin’ny alàlan’ny Wi-Fi.
Ny programa iZip dia afaka manindry sary, horonan-tsary, rindrambaiko ary karazana rakitra hafa ary manolotra azy ireo aminao amin’ny endrika zip. Afaka mampiseho endrika PDF, lahatsoratra, sary, gif, PNG, RTF ary ‌ izy io. Azonao atao ihany koa ny mampiditra ny fampahalalana ilainao amin’ny alàlan’ny Google Drive, Dropbox ary serivisy rahona malaza hafa.
Ny programa Easy Unrar, Unzip & Zip dia afaka mampiseho ny votoatin’ny rakitra voatsindry tsy mila maka rakitra. Miaraka amin’ity rindrambaiko ity, azonao atao ny manisy encryption ny rakitra zip ary mampitombo ny fiarovana azy ireo.
Ny programa ALZip dia manana interface tsara mpampiasa. Miaraka amin’ity programa ity, tsy vitan’ny hoe afaka mi-zip sy unzip ny rakitra ianao, fa azonao atao koa ny mahazo ny fiasan’ny mpitantana rakitra avy amin’izany. Ny fahaiza-mitantana fisie an’ity rindrambaiko ity dia ahitana ny fanokafana, fanaovana kopia, fanovana anarana ary famafana ny rakitra.
Ny Simple Unrar dia ahafahanao manafoana ny rakitra Rar amin’ny findainao Android, mijery ny vaovao momba izany ary manala votoaty mahasalama araka izay azo atao na dia manana rakitra zip simba aza ianao.
Win zip dia programa fitrandrahana rakitra zip Android iray hafa ary manana isa ambony amin’ny Google Play. Miaraka amin’ny Win zip dia afaka manindry sy manala rakitra haingana ianao. Ny endri-javatra mahasoa an’ity rindrambaiko ity dia ny fahafahana manasaraka ireo rakitra amin’ny fomba samihafa, izay ahafahana miditra haingana kokoa amin’ny rakitra tianao.
Mpitantana rakitra PowerGrasp
Ny mpitantana ny rakitra PowerGrasp dia programa fitantanana rakitra feno izay manana fahafahana manindry rakitra. Miaraka amin’ny mpitantana ny rakitra PowerGrasp dia afaka mamorona na manova rakitra zip samihafa ianao. Izy io koa dia manohana ny fiasa drag and drop.
Miaraka amin’ny Zipify dia azonao atao ny manindry na manala ny karazana rakitra rehetra. Ity rindrambaiko ity dia mitovy amin’ny programa 7Zipper izay nampidirinay teo aloha tamin’ity lisitra ity. Azo atao koa ny mijery rakitra amin’ny endrika PDF, GIF, JPG ary PNG miaraka amin’ity programa ity.
Sokafy ny rakitra 2018
Unzip files 2018 dia iray amin’ireo programa tsara indrindra amin’ity lisitra ity ary manana interface interface tsotra sy mora ampiasaina. Ny logiciel dia afaka manindry rakitra sy manala azy ireo amin’ity fanjakana ity ary manohana ireo endrika mahazatra toy ny ZIP, RAR, 7z, tar, tar.gz ary..
Ny fampiharana AndroZip dia programa maimaim-poana izay manome fahafahana manitsy sy mamoha rakitra isan-karazany. Ity programa ity dia manohana endrika toy ny zip, rar, tar, gzip, bzip2, sns ary manana hafainganam-pandeha sy kalitaon’ny asa. Ny mpampiasa interface tsara ihany koa dia tena mety sy voalamina tsara. AndroZip, ankoatry ny maha iray amin’ireo fampiharana zip tsara indrindra azo alaina ho an’ny Android, dia iray amin’ireo fitaovana tranainy indrindra ihany koa. Ity fampiharana ity dia efa nisy ho an’ny Android nanomboka tamin’ny taona 2009.
Ny programa AXArchiver, ankoatry ny fanomezana fahafahana manitsy sy mamaha ny rakitra isan-karazany amin’ny Android, dia afaka mitana ny andraikitry ny programa fitantanana rakitra na ilay antsoina hoe mpitantana rakitra tsara. Mazava ho azy, ny fahaiza-manao izay atolotr’ity fampiharana ity eo amin’ny sehatry ny fitantanana ny rakitra dia tsy ho sarotra toy ny fahaizan’ny programa toy ny ES File Explorer, sns., saingy na izany aza, ny fahaiza-manaony dia tena ilaina sy mety. AXArchiver dia manohana endrika isan-karazany ary manana fahafahana manidy rakitra zip. Ity programa ity dia iray amin’ireo fampiharana zip tsara indrindra azo alaina amin’ny Android.